नेपालको संक्षिप्त इतिहास – हिमालयन ट्रिबुन
२०७७ बैशाख ६, शनिबार १०:५६
नेपालको संक्षिप्त इतिहास
HT २०७७ बैशाख ६, शनिबार १०:५६
‘नेपाल’ शब्द कहाँबाट र कसरी आयो भन्नेमा एकिन तथ्यांक छैन । तर, पनि नेपाल हिमालयको काखमा भएका कारण नेपाल नामको उत्पत्ति ‘निपालयबाट भएको विश्वास गरिन्छ । साथै नेपाल शब्द तिब्बती भाषा ‘नियमपालबाट आएको भन्ने पनि गरिन्छ । जसको अर्थ पवित्र भूमि भन्ने हुन्छ । त्यसैगरी नेपालमा उल्लेख्य मात्रामा ऊनको उत्पादन हुने र ऊन राख्नलाई तिरपालको प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यसैले ऊनको अर्थ ने र तिरपालको अर्थ पालबाट नेपाल बनेको पनि भन्ने गरिनछ ।
किराँत कालः काठमाण्डु उपत्यकामा उत्खननका क्रममा भेटिएका नियोलिथिक उपकरणहरुबाट नेपालमा ९ हजार वर्ष पहिलेदेखि मानिसहरु बस्ने गरेको अनुमान लगाइन्छ । त्यसैअनुसार किराँत जातिका मानिसहरु करिब २५ सय वार्षअघि देखि यहाँ बसोसा गरेको अनुमान लगाइन्छ । किराँती पहाडि र जंगलीको एक जनजाती हो । उनीहरु मध्य एसिया, भारत र हिमालबाट आएर बस्न थालेका थिय । तर, किरात कालभन्दा अघि पनि नेपालमा गोपाल, महिषपाल जस्ता जाति भएको अनुमान लगाइन्छ । तर, यसबारे कुनै पुष्टि भने हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको इतिहासमा किराँत काललाई मुख्य मानिन्छ जुन समयमा किरात राजाको रुपमा यलम्बर राजा थिए भन्ने केही लिखित प्रमाणहरु हामीसामू रहेका छन् ।
पंचायती कालः राणा शासनः वि.सं. १९०३ देखि २००७ सालसम्मको समयमा राणाहरुले नेपालमा पारिवारीक शासन गरेको नेपालको इतिहास छ । त्यस समयमा राणा भाईभाईहरुमा प्रधानमन्त्रीको पद सार्दै जाने प्रचलन थियो । देशका मुख्य शक्तिशाली पदमा राणा खानदानको हैकमी शासन थियो । त्यसबेला देश राणाको इसारामा चल्थ्यो राणाले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगाउतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा अरुलाई कडा बन्देज थियो । यस समयमा जंगबहादुरको नाम निकै चर्चामा थियो । त्यसपछि २००७ मा राणा शासनको अन्त्य हुँदै प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । राणाले गर्दै आएको हुकुमी शासन अन्त्य भयो । जनताले राहतको महसुस गरे । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगाएतका क्षेत्रमा सहजता आयो । तर, प्रजातन्त्र लामो समय टिकेन २०१७ पुस १ गते पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भयो ।
वि.सं. २०१५ सालमा भएको संसदीय चुनावबाट निर्वाचित सरकारलाई २०१७ पुस १ गते दिनदहाडै राजा महेन्द्रबाट अपदस्त गरिएको थियो । पञ्चायती शासन स्थापना गरेपछि राजनीतिक दल प्रतिबन्ध गरिए भने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बी।पी। कोइराला, उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्य, सांसद, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई रातारात पक्राउ गरियो र जेल हालियो । राजनीतिक दलका नेताहरू राजकाज, राज्यद्रोह लगायतका मुद्दामा लामो समय जेल बसे । पञ्चायतले पक्राउ गर्न नसकेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता ठूलो सङ्ख्यामा भारत निर्वासित भए । पञ्चायतको स्थापना भएको २–३ वर्षमै देशभरी पञ्चायतको जगजगी फैलियो । पञ्चायतलाई बलियो बनाउने गरी राजालाई सर्वाधिकार सम्पन्न व्यवस्थासहित २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरियो । पञ्चायती शासन व्यवस्थाका मान्छेहरूले भन्ने गर्दथे कि सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली । उनीहरूले पञ्चायती व्यवस्था र नेपाललाई एक–अर्काका पूरकको रूपमा प्रचार गर्ने गर्दथे । पञ्चायत नरहे देशै रहँदैन भनेर प्रचार गरिएको थियो । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई अराष्ट्रिय तत्व घोषणा गरिएको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलन नेपालमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो जुन १९ दिनसम्म चलेको थियो। यस आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो। आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी र शसस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादीसमेत सम्मिलित भएको थियो। जनआन्दोलन सफल भएसँगै माओवादी जनयुद्धको अन्त्य भएको थियो भने देशमा शान्ती स्थापना भएको थियो ।
Spread the loveविराटनगर — दुईजना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकै दिन नेपालमा थप एकमा कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा अध्यावधिक गरेको तथ्यांकअनुसार अब नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३१ पुगेको छ । उदयपुरको त्रियुगास्थित एक मस्जिदबाट ल्याइएकामध्ये थप एकजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना […]
२०७७ बैशाख २०, शनिबार ०९:२३